Radio emakethe emelelwa eziningi iziphakamiso ukuqinisekisa ukuxhumana phezu sezwe nezimo ezinzima. onobuhle Standard imisakazo ikumodi stowed wokusebenza alibonisi ngokwabo ngendlela engcono, ukuze abasebenzisi abanolwazi ekuqaleni zisebenze ukulungiswa ekhethekile. Amadivayisi ukusetshenziswa entabeni futhi ihlathi emizileni eziningi izimfanelo ezinhle eziholela nokwethenjelwa ukumelana ukuphazamiseka, kodwa njengoba umthetho, ukusebenza kwabo ayiyinhle. Noma kunjalo ukuhlanganisa ukugxusha zobuchwepheshe nesithunzi izindlu zokuzivikela ayengakwenza abadali umsakazo Motorola TLKR-T80 Extreme. Umyalelo, ukubuyekeza kanye impendulo kulesi imodeli kuzosiza ukwenza kwayo okuvelayo okungcono futhi kungenzeka unquma ukuthenga idivayisi.
Umsakazo libhekisela amadivaysi ingxenye polyfunctional. ukuma Intermediate ngakolunye uhlangothi, silondoloza abasebenzisi kusuka ukuqopha imishini, ngakolunye - kwenza kube nokwenzeka ukuba usebenzise inketho umsakazo eziphambili. Imodeli ihlanganisa ibanga-10 km engaba, okuyinto kwanele usebenzisa headset e mikhankaso Geological, kanye yeholide nomkhaya wakhe. By the way, idivayisi Motorola TLKR-T80 Extreme sigxile kahle kwi lihambisana namanye imishini yezokuxhumana, ngakho uma ufisa ungalungiselela ukwenza umsebenzi baby qapha. Nokho, sphere eyinhloko kokusebenza kwalo imodeli - izimo izintaba kakhulu. Eziningana zokuzivikela bezinhlamvu ezinengilazi ahlinzeke isithiyo oluthembekile yokulwa umswakama, uthuli, ukungcola kanye kwelanga.
Naphezu kokuba e ngempela iqembu ethandwa amadivayisi ukusetshenziswa endle, lokhu imodeli uyakwazi ukuhlukanisa kuzici ezithile. Ngakho, uhlu lokuqukethwe obusebenzayo kuhlanganisa ongakhetha ezifana mode zokuqapha isiteshi, ukusebenza izwi, isixwayisi alamu, nokunye. D. Ayikwazi ukusho ukuthi uhlukile ngisho lolu hlobo lwedivayisi, kodwa inhlanganisela yabo namanje into evamile wonke amamodeli kakhulu . Ngokumelene okwenza Motorola TLKR-T80 Extreme ihlukile nje "off-road" izimfanelo zayo. Phakathi kwabo kukhona kutimela umsakazo mayelana nesimo sezulu, khona izibani LED and evulekile uma ethwele, eyenzelwe ukubekwa lula izinsiza.
Abaningi ukugxeka oyisibonelo imodeli izindlu, okuyinto ehlukile design izici. Kodwa kwakungegazi imodi ukuzinikela inikezwe avunyelwe abadali ukwenza ergonomic umshini. Nakuba ngaphandle nibonakala kubantu nilungile ungathi ithuluzi lelingantjintji ngempela abasebenzi isimo, itholakala isandla kahle futhi wesilisa, ngaphandle kokudala izinkinga ukusingatha. Lokhu kwenzeke yize isisindo 140 amagremu (ngaphandle ibhetri). Futhi ukuthuthukisa ukuphikelela lonjiniyela kufanele wabaphakamisa ukwakhiwa ohlangothini ifaka evulekile. Futhi uzinake a imibala ambalwa amelela umsakazo. Le nguqulo eliyisisekelo ubhekwa ophuzi, kodwa kukhona inguqulo emnyama Motorola TLKR-T80 oludlulele, isithombe okuyinto abekwe ngezansi.
Njengoba for the lula indawo izakhi ukusebenza, futhi senziwa inqubo ejwayelekile. Phezulu kukhona isibonisi elincane kodwa ulwazi. Ngaphansi kwalo kuyinto panel nge izinkinobho rubberized, isikhulumi kanye microphone. Ngezinye kakhulu phezulu antenna olufakiwe, flashlight, inkinobho yevolumu , kanye nezixhumanisi ukuxhuma garniturnaja izesekeli. Sekukonke, nomhleli ukhululekile futhi ergonomically enobungane.
Kwakucatshangwa ukuthi ukusetshenziswa imisakazo imikhawulo isiteshi esisodwa singanikezwanga. Umkhiqizi njengoba kit eziyisisekelo inikeza amadivaysi amabili, kodwa namanje inzuzo engaphezulu ukuthenga isethi entsha Motorola TLKR-T80 Extreme Quad Pack, okubandakanya amalungiselelo ezine. Ngo iphakethe ejwayelekile kuyafana kudivayisi nenkanuko edlulele amabhande, umphathi woxhumano, NiMH ibhethri amaseli, ishaja nebhethri,-earphone kanye ukuwuthukulula. Empeleni, ukuze ukuxhashazwa egcwele ngale sethi imisakazo ngokwanele Nokho izesekeli ozikhethela nomkhiqizi inikeza okungenani anhlobonhlobo zonke izinhlobo amathuluzi ukunweba ukusebenza imishini.
Uma ikhono nokubhekana nomphumela ongemuhle izimo zangaphandle, imodeli iyafana ezimbili ngendlela imisakazo okunye iziphakamiso, ngokuya ukugcwaliswa yayo kunezinzuzo ezithile. Ikakhulukazi, kukhona izilungiselelo kuhle ethola Motorola TLKR-T80 Extreme. Izimpawu idivayisi yaphelela ethulwa ngezansi:
Standard ukuvuza-ubufakazi ebiyelwe - IPX4.
Imvamisa ububanzi - kusuka 446 kuya 446,1 MHz.
Amandla umhumushi imisakazo - 0.5 watts.
Inombolo iziteshi imisindo - 8.
Lo engaba reception - 10 km.
Inombolo ikhodi - 121.
Antenna Uhlobo - esikhiphekayo.
Inombolo amabhethri - 1.
Ibhethri Uhlobo - Ni-MH.
Ubuningi ngoba ikhala amathoni - 10.
Ubukhulu - 57 mm ububanzi, 173 mm ubude 40 mm ukujiya.
Isisindo - 140 g
Yini Kubalulekile imisakazo kakhulu, manje ephethwe ngezindlela ezimbili: usebenzisa okhiye mechanical noma ngezwi. Traditional ukulawula wesifunda esifana ukucushwa amakhophi imodeli eziyisisekelo TLKR-T80. Amakhi umsebenzisi ezine eziyisisekelo ngalo ungakhetha phakathi kwamaqembu zokuxhumana ukushaya ucingo futhi wamukele futhi uvimbele idivayisi. Izilawuli ahlukene Motorola TLKR-T80 Extreme sihlinzekela flashlight nevolumu izilungiselelo. Esimweni sokuqala kubalulekile ukusebenzisa ohlangothini eduze ukhiye iraba faka, okwesibili - lokulawula ezimazombezombe ilungu cylindrical. Ukulawula izwi luyasetshenziswa vox umsebenzi, esinikela izilungiselelo ezahlukene ngoba ukuzwela. Ikakhulukazi, nale inketho ungalungisa ukudluliswa isignali.
Uhlu Imisebenzi esemqoka ukuskena kwesiteshi kuhlanganisa ukusebenza kwimodi yokuthula, ukubhekwa alalelwayo, Ukuvinjwa futhi backlight. Uma idivayisi zabelwe kanyekanye ukuqapha iziteshi eziningi. Neziphawulekayo kanye nekhono lokufeza amadivayisi ukulalela egumbini. Kule modi Motorola TLKR-T80 Extreme ithumba futhi adlulisele yonke imisindo namazwi entweni waphawula a umamukeli ezihambisana ngaphambili nalowo ishaneli yomsakazo. Kuyinto kule format futhi kungase kube umsebenzi iyunithi njengoba baby qapha. Kodwa kubalulekile sikhumbule ukuthi ngemva kudivayisi ngomzuzu ukulalela kwenza ikhefu 5-yesibili, ngemva kwalokho iyaqala ukusebenza kumodi inikezwe. izici engeziwe kuzomele sifake khona i-flashlight LED, futhi timer. Ngo kokuhlinzwa, umsebenzisi sakamuva singabangela ezithumela futhi zamukele amasignali ne nemingcele isizinda.
I module umsakazo linesizotha okuqukethwe, kodwa ezinye izinyathelo ku umnini wayo inkonzo kusafanele njalo saphawula. Ikakhulukazi le osebenza ku ibhethri. Inkomba ibhethri ingaqashelwa nge isibonisi Motorola TLKR-T80 Extreme. Ukufundiswa uncoma ukushaja amahora 14. Zonke manipulations nge ibhethri kufanele kwenziwe kuphela ngemuva kokucima umsakazo. Kufanele osekelwa izindlu iyunithi ihlanzekile, ngoba ukungcola ngokweqile owenza kubangele ukuphazamiseka okuyingozi. Nakuba isakhiwo enamathela ngezinga elithile sezingeni eliphezulu yokuvikela impilo sevisi oyifunayo imodeli ngesikhathi esifanele ukuhlanza evele elingaphandle umsakazo. Lokhu kunjalo ngokukhethekile kwabasebasha amasayithi nezixhumi - basuke ivikelwe Imigudu ekhethekile, kodwa sisondelene amanzi kufanele banakekele ukuphepha eyengeziwe.
Ukuze ukuxhumana nabanye imisakazo kufanele kuqala yedivayisi umgudu owodwa nabo. Uma imodi evamile kunomsindo eside, okwenza ukuskena noma ukuqapha. Esimweni sokuqala, umshini kuzovumela ukuthola imvamisa ecacile, kanti eyesibili - ukwenza ukulalela jikelele. Ngemva isiteshi ukuthola ofanele ongaqala ingxoxo ngokusebenzisa module Motorola TLKR-T80 Extreme. Qondisa amanothi ukuthi ukulondoloza ukuzinza izwi ukuthumela idatha kufanele ugcine endaweni umbhobho at ibanga 5-8 cm mayelana umlomo. Njengoba esimweni imodi ukulalela ngesikhathi socingo njalo ngemizuzwana 60 kuzokwenzeka isignali stop. Ukuqinisekisa ukuxhumana okuphephile, umsebenzisi Ungasetha umshini ukusebenzisa isihlonzi. Luphinde ukuthola wonke amalungu inethiwekhi umsakazo ohlelekile - isithonjana elihambisana azoboniswa kudivayisi ukubonisa.
Wamemezela ngumkhiqizi 10 km Ukusabalala engaba Yiqiniso, unikezwa okulindele omkhulu ukusebenza idivayisi. Nokho, umkhuba libonisa usebenzise nezinye izinkomba ezimbalwa ifomu skorretirovannom. Ngokwesibonelo, endaweni ezisemadolobheni bangathembela reception okunokwethenjelwa ngaphakathi 6 km, kodwa endaweni ebiyelwe ngamapulangwe, lesi sibalo antante 8 km. Njengoba kube obuvumelana egcwele, kuyaphumelela kuphela evulekile, kodwa kakhulu injongo Motorola TLKR-T80 Extreme Quad ayenzelwanga ukusetshenziswa ezimweni ezinjalo. Noma kunjalo, izinga uxhumano uqobo uhlala ezingeni kahle eliphezulu. uhlelo umsindo ukunciphisa ihlinzeka isignali ehlanzekile ngaphandle kokuphazanyiswa abalulekile. Futhi lokhu naphezu kweqiniso lokuthi umsakazo inikezwa amaningi njengoba iziteshi 8. Ejwayelekile umsakazo amamojuli ukuthi namuhla ayimisha, kodwa ukushintshwa ukusetshenziswa kakhulu akuvamile bazitike ukusebenza ezifana, kuhambisana ehloniphekile izici lobuchwepheshe.
Abasebenzisi abaningi babika ukuthi idivayisi Kulula ukusebenzisa, onokwethenjelwa futhi igcina isiginali sisonke ngokwanele ukusingatha umthwalo e izimo ezahlukene ukusetshenziswa. Endaweni ehlukile, abanikazi ukudumisa ibhethri okuyinto egcina icala abekwa, kodwa futhi ukusetshenziswa eside akaphelelwa izakhiwo zalo hhayi kuphela. Ngokuya zokuxhumana ezahlukene futhi abe umbono omuhle Motorola TLKR-T80 Extreme. Uphenyo abanye abanikazi lwerediyo ukuthi ngisho ehlathini, ngaphansi kwezimo ezithile, kungenziwa wathola at ibanga-12 km ubude. Enye into ukuthi lokhu kungase kunezele landscape futhi uma isimo sezulu sisihle. Ukunakwa kunikezwa Ukubuyekeza kanye izimfanelo zokuzivikela zedivayisi. Leli bhokisi thembeke ivikela ukugcwaliswa yokulwa umswakama, okuyinto wenza sikwazi ukusebenzisa imodeli emvuleni. Izindleko umsakazo, futhi, ifakiwe ohlwini nezimbi. Idivayisi kubiza inkulungwane 6-7. Deda. emakethe Russian, okungadingi ngokuthi amanani abiza. umsakazo Ibhajethi yalolu hlobo angathengwa at ngengxenye yentengo. Nokho, lokhu kukhetha okuhle ukuthi futhi izothatha isikhathi eside, naphezu kwezimo ezinzima ukusetshenziswa.
Kukhona ukugxeka eziningi ezikhuluma ukungabi khona izakhi zensimbi, okungase ukuthuthukisa UKUQINA umsakazo. Ikakhulukazi, izimbangi abaningi ngenkuthalo esetshenziswa ekwakhiweni steel Ukugunda ngokufanayo bahlelekela izingxenye iziqobosho enethiwekhi. Nokho, esimweni samanje izikhalazo ethile mayelana namandla zalezi zindawo akuyona imodeli. Zonke ezinye izinto akuyona ukugxekwa, kodwa kukhona izimangalo enhlanganweni Motorola TLKR-T80 Extreme Quad. Izibuyekezo lubonisa ukuthi kwezinye izindawo kukhona plastic obandayo backlash. Futhi ugcizelela yokuntuleka umsindo ababuthakathaka, ukuqeda lokho kungasizi ngisho esiphezulu isilawuli ukumisa. Kodwa lokhu kungenxa xaxa ukuphazamiseka yangaphandle - isibonelo, uma umoya audibility eqinile futhi akazange zinyamalale.
Njengoba ephumelelayo yokuxhumana nensimu izimo lokhu samuntu kubhekwe njengento ikhambi elilungile. Nakuba imodeli uMnyango ube usufaka eziningi imininingwane ukusebenza, izinzuzo zako ezisemqoka ezisetshenzisiwe njengoba izimfanelo eziyisisekelo. Phakathi kwabo kukhona enokwethenjelwa reception, amandla nokukhuthazela. Noma kunjalo, indima ka-jikelele idivayisi umsakazo Motorola TLKR-T80 Extreme Quad kufanelekile neze, ngoba ezinye izimo lungaphuma ukuthi ukubhujiswa kwamaJuda izici ukuthi lokhu imodeli akanayo. Kulesisimo-ke, kuyafaneleka imenyu kunalokho nesizotha futhi bangalisebenzisi njalo kusebenziseka kalula. Kusobala ukuthi i-interface yakhelwe isitayela ezivamile kudivayisi utilitarian nokunokwethenjelwa, kodwa lokhu ehilelekile kuletse kungenzeka ngokusebenzisa ezinye umsakazo. Kodwa-ke futhi, uma uthenge idivayisi ukusetshenziswa mikhankaso, Kuzonyuka kanye namanye esake sawenza sisendleleni endaweni ihlathi ke lezi amaphutha fade ngemuva.
Kanjani ukukhetha isibhamu kagesi? Kuhle isibhamu. Inani, ukubuyekezwa